Amandla State Duma kanye yendima yayo ekuqhubeleni ukubanjwa kweqhaza uhulumeni - konke lokhu Sinesithakazelo esikhulu abantu. UMbuso Duma nomzimba zomthetho, yingakho imisebenzi yayo kufanele iqondiswe izithakazelo labantu iyonke.
Amandla Duma State
Facilities engaphansi we ngegunya lomthetho, kuMthethosisekelo Russian. Kuwufanele ukukhumbula ukuthi wamukelwa inhlolovo ethandwa. Ngakho, Russian State Duma izifakazo zihlanganisa:
Ukwamukelwa nokucubungula izikweletu (lena umsebenzi oyinhloko endlini ephansi weSigungu Federal).
Ukukhishwa kwemvume nokuqokwa ikhanda lika Government of the uMengameli wezwe. Ukuthi Duma State phakathi nesonto ubona isiphakamiso sikaMengameli. Kumele kuqashelwe ukuthi isicelo kumele uvele wena matfupha ngesikhathi ngegunya lomthetho futhi ukuphendula imibuzo ukuthi uzonikezwa kusaba kwesigamu sehora. Ngemva kwalokhu okunye kokuphenywa kwakhe kwenzeka isilinganiso izingxenyana zaso. Futhi, kungase kuphakame isimo uma udinga ukuvota kuyimfihlo ngezindlela ivoti eliyimfihlo. Uma ngabe umhlolwa sinqatshiwe, wabe esethula iphrojekthi entsha, okuyinto kunikezwa kahle ngesonto elilodwa. Ngemva abazobhapathizwa kwenqatshwa lwesithathu uMongameli unelungelo ukuncibilikisa State Duma amise inhloko yawo ngqongqotshe wedwa.
Ukugunyazwa isabelomali isimo. Amandla Duma State kanye kule nto. Anakho omunye sici: ibhajethi esenziwayo ngemva ukufundwa ezine liphinde ekamelweni eliphansi avumela umbiko ogcwele kwi emalini kahulumeni ukubulawa nguHulumeni.
Udaba lokuhlolwa kwesifo ukungalethembi / ithemba kuHulumende. RF State Duma bangase banqume ukuthi amandla esiphezulu kuleli zwe nokudikibala. Uma ngevoti leningi kuqinisekisiwe, uHulumeni eziyoncibilika.
ushwele. State Duma amandla enwetshiwe kule ndawo, nje emlandweni kokuthathwa kwesiqunto izikhathi ezingaphezu kuka-10, i-yamuva iningi okwenzeka iminyaka engu-10 edlule.
Ukuqokwa iimphathiswa ezithize. UMbuso Duma unelungelo lokuqoka usihlalo we-Accounting Chamber kanye Central Bank of Russia, kanye Ophethe Wamalungelo Esintu. I kuqala lesisihlabelelo emva izincomo, kanti owokugcina uyoba ngo - ngesisekelo ukuvota ngokukhethekile.
Umbuzo ukungabi nethemba kuMongameli. Futhi umsebenzi anjalo esikhathini Duma State. Ukuthi unelungelo ukubeka phambili isiphakamiso esinjalo, kodwa ngempela kuphela icala uma ithola emavi 150 amasekela.
Ukucutshungulwa ezinye izingqinamba inqubomgomo angaphandle (kuphela sokusingatha inhloko yezwe).
Ukusebenzisa kuya Enkantolo Yomthethosisekelo ukuze Ukucabangela imithetho soMthethosisekelo.
Vyshepredstavlennye namandla Duma State ibalulekile ukuze izwe lethu, njengoba lokhu umzimba umthetho, nokuthi inhlalakahle sabantu Russian sincike kuyo.
Amamodeli, izinhlobo nezinhloso nemigomo yeNhlangano wendawo ukuzibusa
United States Marine Corps. US Marine Corps
Ukubusa komthetho: umlando imibono izimiso eziyisisekelo
Bee Larva: isigaba zentuthuko ukuze omdala, imikhuba yokondla amaqiniso athakazelisayo
Uma une izinwele elincanyana, yini okufanele uyenze nabo?
Ukufaka lewayini e-Ubuntu kanye nakwamanye Linux izinhlelo